Tratry ny tsindry ny Jirama : tsy maintsy miverina, anio, ny jiro eto Toamasina | NewsMada
Tratry ny tsindry ny Jirama : tsy maintsy miverina, anio, ny jiro eto Toamasina
Nitarazoka ny asa! Tsy araka ny fampanantenan’ny tompon’andraikitry ny Jirama ny famerenana amin’ny laoniny ny herinaratra eto Toamasina. Hanamarinana izany, tsy tafaverina araka ny tokony ho izy ny famatsian-jiro, mampitaraina ny mpanjifa. Nampiaka-peo araka izany, ny filoham-pirenena, ny zoma 19 janoary teo, fony izy nandalo taty an-toerana, nanome baiko ampahibemaso fa tsy maintsy miverina ny herinaratra ny alarobia 24 janoary (anio).
Nasiny teny koa mikasika ny resabe mandeha fa misy olona maka vola 5.000 Ar isan-tokantrano. Miparitaka any anaty tambajotra sosialy rahateo io feo io, lazaina fa ny lehiben’ny faritra ny maniraka ireny olona ireny.
Nihaona tamin’ny mpanao gazety, araka izany, ny alatsinainy teo, ny lehiben’ny faritra, Talata Michel, ny tale lefitry (DGA) ny Jirama , Randriamanana Henri ary ny talem-paritra (efa handao tsy ho ela ny toerany). Nilaza ny DGA fa “tsy maintsy tratrarina ny fanambin’ny filoha. Miisa 700 ny andrin-jiro tonga eto Toamasina hanoloana ireo simba sy lo”. Nomarihiny fa nahatonga ny fahatapahan’ny herinjiro nandritra ny fandalovan’ny filoha tao amin’ny hotely Calypso, ny zoma teo, ny tsy fifankazahoana teo amin’ny samy teknisianina.
Naneho ny hatezerany ny lehiben’ny faritra ka hitory izay olona nanely ilay tsaho tanaty tambajotra sosialy. Nanangana ady tamin’ny mpanao gazety kosa ny talem-paritry ny Jirama, handao ny toerany.